महाधिवेशनको तयारीमा देउवा, टिम बनाउन गृहकार्य सुरु « रिपोर्टर्स नेपाल
महाधिवेशनको तयारीमा देउवा, टिम बनाउन गृहकार्य सुरु
काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । सभापतिमा दोहोरिनेगरि देउवा अघि बढेका छन् । यसको लागि उनले आफूनिकट नेताहरुसँग छलफलसमेत अघि बढाएका छन् । सभापतिमा लागि यसपटक विमलेन्द्र निधिले उम्मेद्धवारी घोषणा गरिसकेका छन् । उनले महाधिवेशनलक्षित सम्पर्क कार्यालयपनि तामझामका साथ खोलिसकेका छन् । सभापतिमा कसलाई उठाउने भन्नेबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन् । तर, जसलाई उठाएपनि सहमतिमै उम्मेद्धवारी दिने पौडेल पक्षको भनाई छ ।
सभापति देउवाले भने अहिले महाधिवेशनको लागि आफ्नो टिम निर्माणको लागि गृहकार्य थालेका छन् । यसपटक उनले उपभासभापतिमा विजयकुमार गच्छदार र विनोद चौधरीलाई अघि बढाउन खोजेका छन् । यो विषयमा देउवाले आफ्नो टिमका नेताहरुसँग परामर्श समेत थालेका छन् । चौधरी पनि यसपटक उपसभापतिमा उठ्ने मनशायमा छन् । महामन्त्रीमा भने देउवाले डा. प्रकाशशरण महतलाई अघि बढाउन खोजेका छन् । तर, अहिलेसम्म उनले यसबारेमा कुनै निर्णय लिएका छैनन् । महामन्त्रीमा अहिलेसम्म गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेद्धवारी घोषणा गरिसकेका छन् । उम्मेद्धवारी घोषणा गरेका थापा र शर्मा दुवैजनाले आफ्नो कित्ता क्लियर गरिसकेका छन् । थापा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षमा खुल्न थालेका छन् भने शर्मा भने निधिको पक्षमा खुलेका छन् ।
अहिले कांग्रेसको वडा अधिवेशन चलिरहेको छ । तर, कतिपय जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेपछि कार्यतालिकासमेत पार्टीले संशोधन गरेको छ । यही भदौ १८ गते निर्धारण गरिएको गाउँ/नगर वडा अधिवेशन सबै जिल्लामा सम्पन्न हुन नसकेपछि कार्यतालिका संशोधन भएको हो । पार्टीका क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भइसकेका सबै ५७ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
संशोधित कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ हुन बाँकी २० जिल्लामा गाउँ/नगर वडा अधिवेशन आगामी असोज ५ गते तोकिएको छ । त्यस्तै गाउँरनगरपालिका अधिवेशन असोज ९ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १२ गते र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनरएक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज १८ गते निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज १८ गते तोकिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्का र भारतीय विदेशीमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता हुने
काठमाडौँ, १० असोज। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र भारतीय विदेशीमन्त्री एस जयशंकरबीच छलफल हुने भएको
कांग्रेसको भोजपुर–अरूण समिति सभापतिमा राई, उप–सभापतिमा सापकोटा
काठमाडौं, १० असोज। नेपाली कांग्रेसको भोजपुर अरुण गाउँपालिका समितिको सभापतिमा श्रीकुमार राई र उपसभापतिमा डिल्ली
काठमाडौँ, १० असोज: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण
मारवाडी सेवा समिति र श्री पशुपति गौशला धर्मशालाद्धारा विभिन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा वितरण (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ९ असोज । मारवाडी सेवा समिति र श्री पशुपति गौशला धर्मशालाले संयुक्त रुपमा विभिन्न
आज थप ६ संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं, ९ असोज । कोरोना संक्रमणबाट आज थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै
आज ९५३ संक्रमित थप, १३ सय ७१ निको
काठमाडौं, ९ असोज । आज नेपालमा कोरोना भाइरसका ९ सय ५३ जना संक्रमित थपिएका छन्
वाग्मती, १० असोज: गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले
चीनको सिचुवानमा पहिरो जाँदा थुप्रै बेपत्ता
१० असोज: दक्षिणपश्चिम चीनको सिचुआन प्रान्तको तियानक्वान काउन्टीमा भारी वर्षाका कारण आइतबार बिहान गएको पहिरामा
अपहरणका आरोपीलाई मारेर शव चोकमा झुन्ड्याउदै तालिबान
काठमाडौं, असोज १० । तालिबान अधिकारीले मृत्युदण्ड र अङ्गच्छेनजस्ता कठोर दण्ड फेरि दिन थालिने चेतावनी